Askar Lagu Kala Dilay Degmooyinka Hodan Iyo Yaaqshiid. – Bogga Calamada.com
Askar Lagu Kala Dilay Degmooyinka Hodan Iyo Yaaqshiid.
April 20, 2017 5:39 pm Views: 63
Ciidamo ka tirsan guutada Iqtiyaalaatka ee Mujaahidiinta ayaa weeraro qorsheysan ku dilay Askar ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya, ka dib weeraro qorsheysan oo ay ka fuliyeen meelo kala duwan oo ka tirsan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Mid ka mid ah weeraradan oo lagu khaarijiyey laba askari oo ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay isgoyska Bakaaraha ee magaalada Muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha Mujaahidiinta.
Ilo wareedyo ayaa Idaacadda Andalus u sheegay in askarta la toogtay iyagoo shirka hore ka saaran gaari caasi ah oo marayey meel u dhow isgoyska.
Goobjoogeyaal taagnaa halka uu dilka ka dhacay ayaa sidoo kale sheegay in askartu ay wateen hubkooda, ayna ku labisnaayeen dareeska ciidanka murtadiinta.
Meel kale oo magaalada ka mid ah waxaa lagu soo waramayaa in lagu dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaatka Ashahaada la dirirka ee kooxda ridada Soomaaliya.
Dilkan ayaa ka dhacay meel u dhow Isgoyska Fagax ee degmada Yaaqshiid, Waxaana Ilo wareedyo ay noo xaqiijiyeen in mujaahidiinta weerarkaas fuliyey ay askariga dhowr xabadood kaga dhufteen qeybaha sare ee jirka, ka dibna uu halkaas ku quurbaxay.
Dilalka qorsheysan ee ka dhanka ah murtadiinta, si gaar ah maleeshiyaatka kooxdaas ayaa waayadan ku soo badanayey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, Waxaana tan iyo horaantii sanadkan magaalada ka dhacay weeraro dhowr ah oo galaaftay nolosha boqolaal murtadiin ah.